SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲတရုတ်ဝေငှ | Data Recovery
နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲတရုတ်ဝေငှ
အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို activation code ကို download လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. အောက်ပါအဆင့်တွေကိုRescuePRO®：
1. သင့်ရဲ့ SanDisk လွန်ကဲကူပွန်ကိုလက်ခံရရှိနှင့်သင်၏ကဒ်ကိုအောက်တွင်ကို select ပေးပါ。
>>>>လျင်မြန်စွာ：သင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပေါ်မှာရေးထားတဲ့စေခြင်းငှါRescuePRO®သို့မဟုတ်RescuePRO® Deluxe ဖြစ်တယ်，သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုကိုလုပ် ကျေးဇူးပြု.。
**** သင်တစ်ဦးကူပွန်RescuePRO®SSDရှိပါက, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
2. ကနေသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု Make、သင်၏ operating system တစ်ခုကိုရှေးခယျြဖို့သက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူကူပွန်ကိုအောက်တွင် button。3. အဆိုပါ activation code ကိုရယူဖို့ Serial Number ကို အသုံးပြု. တဲ့အခါမှာ RPRID，သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ဆက်စပ်ကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု.LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်。 ** ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ：သင်တစ်ဦးကူပွန် RescuePro Deluxe ရှိပါက，序列号以 RPRID-0305အစ,
သငျသညျ SanDisk RPRID မှပေးဖို့လိုအပျ-0305 ပြီးပြည့်စုံသောနံပါတ်စဉ်နှင့်အတူစတင်，တစ်ဦးကိုအစားထိုး sequence ကိုအရေအတွက်အားရရှိရန်。**
如果您使用Windows XP, ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ 可以获得 RescuePRO® Standard 的XP兼容版本，或者 ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ 可以获得 RescuePRO® Deluxe.的XP兼容版本。